ပွင့်လင်း P8 P16.66 P20 P31.25 အပြင်ဘက်ကွက် LED မျက်နှာပြင် / LED ကုလားကာ display ကို - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
မီဒီယာမျက်နှာစာတွင်အစက်များကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာပြသနိုင်ခဲ့သည်, ကုလားကာပြားကွက်, ပွင့်လင်း P8 P16.66 P20 P31.25 အပြင်ဘက်ကွက် LED မျက်နှာပြင် / LED ကုလားကာ display ကို
ကွက်စီးရီးထူးခြားတဲ့ features တွေ::
1. အလွန်ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်———-14ကီလိုဂရမ် / စတုရန်းမိုင်, ဖန်ထရံကိုတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်သို့ install လုပ်နိုင်ပါတယ်.
2. မြန်တပ်ဆင် ———ပျမ်းမျှအား 5-10 တစ် ဦး ချင်းစီကက်ဘိနက်ကို install လုပ်ဖို့စက္ကန့်.
3. အသက်ရှည်ရှည်တည်ငြိမ်မှု——-LEDs ၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ရန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနည်းပါးသည်.
4. စွမ်းအင်ထိရောက်——–ပျမ်းမျှတစ်စတုရန်းနှုန်း 160W
6. အလုပ်သမားအကျိုးရှိစွာ——–အားဖြင့်အလုပ်သမားအချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပါ 60%
Q1:led display ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ?
က: သင်စဉ်းစားသင့်သည်3သင်တစ် ဦး ဦး ဆောင်မျက်နှာပြင်ကိုရွေးချယ်သည့်အခါရိုးရှင်းသောမေးခွန်းများကို.
1. ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာလဲ- မိုးလုံလေလုံသို့မဟုတ်ပြင်ပ ?
2. ငှားရမ်းရန်အတွက်လား ( တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့မကြာခဏပြောင်းရွှေ့ရန်လိုအပ်သည်) သို့မဟုတ်ပုံသေတပ်ဆင်မှုအတွက် (အမြဲတမ်းနေရာတစ်နေရာထဲမှာ install လုပ်ဖို့)?
3. သင်ဝယ်ယူချင်သော led screen ၏အကြမ်းဖျင်းအရွယ်အစားကဘာလဲ?
Q2:ဘယ် pixel pitch ကိုရွေးသင့်သလဲ?
က: 1.25 ကနေ pixel အစေးတစ်ခုအကွာအဝေးရှိပါတယ်–30မီလီမီတာ, အကြမ်းအားဖြင့်နိယာမ - အများအားဖြင့်သေးငယ်တဲ့ pixel ရှိတယ်(1.25mm-10mm) မိုးလုံလေလုံ ဦး ဆောင်မျက်နှာပြင်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, ပိုကြီးတဲ့ pixel (10မီလီမီတာ - 30mm) ပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်မျက်နှာပြင်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်( ဥပမာအားဖြင့်အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုတွင်ကြီးမားသောကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ကြီးဖြစ်သည်).
က:စျေးကွက် - တစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပေါ်တွင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှစ်ခုမျိုးရှိပါတယ်, ပြီးတော့အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ led screen အတွက်(များသောအားဖြင့် 20sqm ထက်ပို) ထပ်တူကျသောထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်, 20sqm အောက်တွင် syn or asyn ကိုသုံးရန်သင့်အပေါ်မူတည်သည်. သို့သော် asyn ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ Refresh Rate သည် sync control system ထက်များစွာနိမ့်ပြီးသင် wifi ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်, 3ဂ, 4G စသည်တို့ကြိုးမဲ့.